Mankalazà am-pitiavana ny fiaraha-miasa ho an'ny mpitsabo any Hongzhu sy Rukang mba hanao sonia ny fifanarahana amin'ny famokarana seza misy seza. Ny mpitarika avy amin'ny andaniny roa dia Atoa Yang sy Andriamatoa Lv manatrika izany ary mampanantena fa hiezaka ny hanohana ny fifanarahana amin'ny fomba mahomby izy ireo. Manomboka izao, Hongzhu mpitsabo dia afaka mamatsy seza misy kodiarana sy mpandeha hemiplegic miaraka amin'ny orinasa matihanina sy vidiny mifaninana eo an-tsena. Ny seza seza misy kodiarana no afaka manome,
Ny fiheverana lehibe indrindra rehefa misafidy seza misy kodiarana dia ny haben'ny seza misy kodiarana. Ireo toerana lehibe mitondra ny lanjany ho an'ireo mpampiasa seza misy kodiarana dia manodidina ny sakamalahatra efatra manodidina, manodidina ny femur, manodidina ny haavon'ny Yang sy ny soroka. Ny haben'ny seza misy kodiarana, indrindra ny sakan'ny seza, ny halaliny ary ny haavon'ny lamosin'ny raharaha, ary koa ny elanelan'ny elanelan'ny tongotry ny tongotra sy ny cushion seza, dia misy fiatraikany avokoa ny fiovan'ny ra amin'ny faritra mifandraika amin'ny mpandeha, ary miteraka fikorontanana amin'ny hoditra, eny fa na dia ny fanerena aza. Ankoatr'izay, ny fiarovana ny marary, ny fahaizan'ny fandidiana, ny lanjan'ny seza misy kodiarana, ny fampiasana, ny endrika ary ny olana hafa dia tokony hodinihina.
(1) Sakan'ny seza: refy ny elanelan'ny elatra roa na roa na roa rehefa mipetraka. Manampy 5cm, ary hisy hantsana 2,5cm eo amin'ny andaniny roa rehefa mipetraka. Tery aloha ny seza ka sarotra ny miakatra sy midina amin'ny seza misy kodiarana. Ny ampinga ambony sy ny feny dia masiaka. Raha be loatra ny seza dia tsy mora ny mipetraka. Tsy mahay mampiasa ny seza misy kodiarana. Ny tongotra dia mora reraka. Sarotra ihany koa ny miditra sy mivoaka ny vavahady. (2) halavan'ny fipetrahana: refeso ny elanelana mifanelanelana eo anelanelan'ny vongan-damosin'ny lamosina sy ny hozatry ny crus gastrocnemius rehefa mipetraka ary mampihena ny valin'ny fandrefesana 6,5cm. Raha fohy loatra ilay seza, dia miha-mavesatra amin'ny ischium ny lanjan'ny vatana, izay mora miteraka tsindry be any amin'ny faritra eo an-toerana; raha lava loatra ny fipetrahana, dia handraraka ny fizarazarana fisarahana izy io, misy fiantraikany amin'ny fikorianan'ny ra ao an-toerana, ary mandrisika mora ny hoditra ao an-toerana. Ho an'ny marary manana fehin-kibo fohy na fifanarahana lava amin'ny lohalika, dia tsara kokoa ny mampiasa seza fohy. (3) haavon'ny seza: handrefesana ny halaviran'ny ombelahin-tongony (na ombelahin-tongony) mankany amin'ny akanim-borona rehefa mipetraka izy, ampio 4cm, ary apetraho eo amin'ny 5cm ny tongotra amin'ny tongotra. Raha avo be ny seza dia tsy afaka miditra amin'ny latabatra ny sezatra; raha ambany loatra ilay seza dia lehibe loatra ny lanjan'ny taolana mipetraka. (4) Ny haavon'ny fitaovam-piadiana: rehefa mipetraka, mijoro ny sandry ambony ary ny satroka no apetraka eo amin'ny satroka. Refesina ny haavony avy amin'ny fipetrahana seza amin'ny zoro ambany amin'ny tànana, miampy 25cm. Ny haavon'ny satroka mety tsara dia manampy amin'ny fitazanana sy fifandanjana ara-batana tsara, ary mamela ny tongony ambony hipetraka amin'ny toerana mampitony. Feno avo loatra ny handrail, ary ny sandry ambony dia voatery misandratra, izay mora tazo. Raha ambany loatra ny fitaovam-piadiana dia mila mandroso mandroso ianao mba hitazomana ny fifandanjana. Tsy vitan'ny havizanana fotsiny, fa mety hisy fiantraikany ihany koa.